Btk Iyo Xarunta Saadka Oo Ku Saabsan Kuxigeenka Sifeeyaha | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAXarunta Btk iyo Logistics Centre ee ku saabsan Ku-xigeenka Xildhibaannada
Xarunta Btk iyo Logistics Centre ee ku saabsan Ku-xigeenka Xildhibaannada
Wuxuu joojiyay fikradaha ku saabsan Tbilisi-Kars Railway iyo Xarunta Saadka.
Kuxigeenka AK Party Ahmet Arslan, Kars waxaa lagu qaban doonaa Xarunta Saadka waa mid aad muhiim u ah, dadka waqti ka waqti, 'Waxaan la yaabanahay in Xarunta Saadka loo gudbay?' Isaga oo ogaysiinaya inay ka labalabeynayso ama qof jecel yahay in sidaas loo yiraahdo, Xarunta Saadka ayaa gashay barnaamijka maalgashiga, ayuu yidhi.
Kuxigeenka Ahmet Arslan, ayaa bayaan ku yiri; Waxaan ka duwan nahay kuwa kale; Annagu waxaan nahay xibiga xisbiga xukuma. Kaliya maahan inaan baxno oo aan hadal sameyno. Xaqiiqdii waxaan la soconaa shaqada. Waan ognahay sida ay u shaqeyso. Tani waa mid annaga noo muhiim ah, anaga ahaan horumarka caafimaad ee shaqada iyo shaqaduna waa muhiim. Ama waad soo bixi kartaa oo waxyaalo aad u kala duwan warbaahinta ugu sheeg kartaa kaamirooyinka hortooda. Ama markaad maqasho wax, qof kale ayaad u sharixi kartaa. Nasiib darrose, dadka inaga baxsan waxay leeyihiin xamaasad noocan oo kale ah. Waa inaan kuu sheegnay. Dhibaatadayadu waa 'ma ahayn inaan is idhi,' dhibaatadeenna waa inaanu qabannaa. Sidaa darteed, waan yeelnaa.
LACAG LA'AAN OO KU SAABSAN BTK OO LAGU SAMEEYO LACAGTA 1 QUADRILLION TL.
Kuxigeenka AK Party Kars ah Ahmet Arslan ayaa sheegay in khadka BTK Railway dib loo naqshadeeyay oo looguna kireeyay labo khad. “Dabcan, annagu ma taagnaan shaqo la’aan xilliga qaboobaha, kuxigeenka Ahmet Arslan; “Gaar ahaan xilliyada dhismaha ee soo socda, si si wanaagsan loogu isticmaalo 6-7 xilliga dhismaha ee billaha ah, waxaan raacnay dhammaan mashaariicaha la maalgashanayo iyo inaan bilowno howlaha hindisada. Mashruuca Tareenka '1's Baku-Tbilisi-Kars Railway aad ayuu muhiim ugu yahay Karsheeradeenna, aad ayey muhiim ugu tahay gobolkeenna isla markaana muhiim u ah waddankeenna Mashruuca Tareenka' BTK Railway wuxuu maray muddo aad u dheer wadooyin badanna waxaa laga soo saaray mashruucan, oo ay weheliso dhismahooda superstructure-ka waa hal khad oo keliya. waxaa jiray qadka tareenka uu tegi karo. Muddadan, ka dib markii aan la kulannay Wasiirradeenna, waxaa la go’aamiyay in la helo layn laba-jibaar ah ee superstructure-ka. Mashruuc cusub ayaa loo diyaariyey si looga dhigo laba xariiq oo koronto iyo calaacal ah iyo in saldhiga hadda jira laga dhigo xarun casri ah. Iyo mashruucan, 26 ayaa laga xaraashay Maarso. Iyada oo lacagtii 600 Trillion TL maanta, 600 milyan TL. hindise isla markaana Agaasinka Guud ee DLH uu hadda wado shaqadiisa degdegga ah. Isla markii la soo gabagabeeyo hindisada, marxaladda labaad ayaa bilaabmi doonta. Mashruucan wuxuu ku saabsan yahay 1 Billion TL. 1 quadrillion TL lacagtii hore. maalgashi aad u weyn. Waa maal gashi aad u balaaran. Waa maalgashi weyn sida filashooyinka Kars. Turkey ayaa laga filayo sidii maalgashi weyn, "ayuu yiri.
XARUNTA LOGISTICS WAA LAGU AQBALAY IN LAGU TALO!
Waxaa loo sameeyay inay u soo baxaan sida kuwa kale. Waxaan sameynaynaa tan. Arslan wuxuu sheegay inaysan u baahnayn wax ka hor imanaya kaamirada iyo warbaahinta kaliya inay muuqdaan. Si kastaba ha noqotee, waxaan marwalba sheegnay in mashruucan BTK uusan macno u laheyn Kars kaligiis. Xarunta Saadka ee laga dhisi doono Magaalada Kars mashruucan ayaa ah mid aad muhiim u ah. Dadku mararka qaarkood way ka waalaan inay ka baxaan Xarunta Saadka? Ama qof ayaa jecel inuu taas dhaho. Xaqiiqdii, Xarunta Saadka ee Kars ayaa xaqiiqdii gashay barnaamijka maalgashiga. Agaasinka Guud ee Tareenka Waddooyinka (FDI) ayaa diyaarinaya tan. Si kastaba ha noqotee, waa in la dhammeeyaa oo la galiyaa wadajirka mashruuca BTK Railway. Kaliya markaad dhammayso Xarunta Saadka haddii BTK Tareenka aan la dhammeyn; Xarunta logistics keligeed macno ma samaynayso. Sidaa darteed, waxaan la soconaa mashruucan ilaa dhamaadka horumarka ICTA. Waa inaan raacno. Waxaan ka duwan nahay kuwa kale; Annagu waxaan nahay xibiga xisbiga xukuma. Kaliya maahan inaan baxno oo aan hadal sameyno. Xaqiiqdii waxaan la soconaa shaqada. Waan ognahay sida ay u shaqeyso. Taasi waa waxa anaga noo muhim ah. Haddii ay muhiim noo tahay in aan sameyno horumar caafimaad oo aan qabanno shaqada, waad bixi kartaa oo waxaad oran kartaa waxyaabo aad u kala duwan oo ka horreeya kaamarada warbaahinta. Ama markaad maqasho wax, qof kale ayaad u sharixi kartaa. Nasiib darrose, dadka inaga baxsan waxay leeyihiin xamaasad noocan oo kale ah. "Waa inaan dhahno", dhibaatadeenna maahan 'waxaan oran lahayn waa bizim waa mushkiladaheenna "waa inaan sameynaa." Labada mashruuc ee tareenka 'BTK Railway' ayaa si dhakhso leh u socda. Marka la barbar dhigo, ma jiraan wax carqalad ah oo ka dhashay qorshaynta Xarunta Saadka.
XARUNTA LOGISTICS UMA SAMEEYO SIXARKA ERZURUM
Kuxigeenka AK Party Kars Ahmet Arslan, oo hoosta ka xariiqay in dadku ay tahay inay rumaystaan ​​ereyada madhan ee ay soo saartay Xarunta Saadka iyadoo sameysay ajandeyaal aan dabiici ahayn oo ay sameeyeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed, wuxuu yiri soo socda si kooban:
Mar labaad, waa muhiim in la sharraxo hal shey oo dheeri ah. Dadku waxay dhahaan, mudane! Xarunta Saadka ayaa u dhaqaaqday Erzurum. Maya, waxaan ku jiray tan sanado. Xarunta Saadka ee Erzurum ama dib u dejinta rarka iyo soo dejinta waa dhacdo ka duwan. Xarunta Saadka, oo la saadaalinayo in lala kaashanayo Mashruuca Tareenka ee BTK ee Kars, ayaa ah mashruuc ka duwan. Sidaa darteed, laba mashruuc waa inaan lagu darin midba midka kale. Dabcan, maalgashiga noocan ah waxaa laga sameeyaa guud ahaan dalkeena. Sidaa darteed, waxa anaga noogu muhiimsan waa midka laga sameeyo Kars. Macno malahan wixii inaga baxsan. Waxaan rabaa inaan arrintan xooga saaro gaar ahaan. Ka fikir garaashka baska si aad ugu qaabeeyso Xarunta Saadka ee maskaxda dadka, ama meel aad ku dejiso kuna rarno xamuul saaran gaari xamuul, xarun logistics yar. Xarunta saadka ee saadaalinta hore ee tareenka ama tareenadu waa tan: 300 illaa 400 waxaan ka hadlaynaa dhul aad u ballaaran oo kun mitir oo laba jibaaran. Ku dhawaad ​​boqol dhisme oo ku yaal aaggaan iyo shaqooyinka soo socda ayaa laga sameyn doonaa dhismayaashaan. Waxyaabo badan ayaa halkan imaan doona, laga yaabee warshadeyn, laga yaabee inay baakadeysan yihiin, oo ay kala soocayaan tareennada halkaan lagu kala saari doono. Waxay noqon doontaa culaysyo cusub. Xamuulkan ayaa aadi kara Bartamaha Aasiya isagoo kusii jeeda dalka Georgia oo saldhigoodu yahay Kars kadibna Kars-Iğdır-Dilucu, Nakhchivan iyo Iran ayaa mari doona. Waxa la qaban doono waxay noqon doontaa Kastamka. Waxaa jiri doona aqoon-isweydaarsiyo, bangiyo, warshado, magaalada lafteeda, ma ahan magaalo ay dadku ku nool yihiin, dadku waxay soosameeyaan badeecado, alaabtooda u raraan, suuqa, laga yaabee xitaa huteel ay ku jiraan dhammaan noocyada qalabka bulshada. Xarunta loojistikada ayaa la keeni doonaa Kaararka. Waxaan kuu sheegayaa, waxay keenaysaa laba shay oo Kars. Shaqaalayntu waxay rafcaan u keeni doontaa kumanaan dad ah oo aad ugu muhiim ah Kars. Tani aad ayey muhiim noogu tahay. Marka labaad, markaad aasaasayso warshado sameeya macaamil ganacsiyo badan oo kuxiran kun mitir oo laba jibbaaran oo ah 400, warshadan waxay kaqaadan doontaa magaalada waxayna siineysaa magaalada. Markaa waxay gacan ka geysan doontaa farshaxan-yaqaannada. Mar labaad meel sidan oo kale ah, dad aad u tiro badan oo dibadaha ka yimid ayaa imanaya. Waxay ku saabsan tahay ganacsiga, laakiin waxaan ognahay in dadku ay uga faa'idaysan doonaan Kars ujeeddooyin dalxiis markay yimaadaan Kars. Waxay booqan doonaan Guinea Kars. Way ku biirin doonaan dareenkan, waan danaynaynaa taas.
Hadal ficil ah oo ka soo baxay Aqalka Sare ee Xarunta Soodhaweynta Badda ee Badda
KARSİAD Xarunta Suuqiska iyo xariijinta tareenka BTK ee miiska
Qeexida wararka ku saabsan xarunta dhexe ee xarunta saadka ee laga dhisayo Diyarbakir
Mareegaha tareenka ee ka soo jeeda jagadan hore ee CHP
Visankırı Booqashooyinka Kuxirnaanta Warshadda issankırı Scissor
Maqnaanshaha Metro ee AKP
Nigde ku-xigeenka, ku-xigeenka Nevsehir Hodri Meydan
Dhamaadka dhammaadka Xilliga Cusub ee Newkapı